Ukuguqula ama-Post Slugs ku-WordPress ye-SEO | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 2, 2009 NgoLwesithathu, July 9, 2014 Douglas Karr
Ngezikhathi lapho wenza khona igama elingukhiye lapho ukubhuloga kokusebenza kwenjini yokusesha, ungathola ukuthi inani eliphakeme labaseshi lipela kabi noma lisebenzisa amagama afanayo. Isibonelo kungaba yi-USS Forrestal versus I-USS Forestal.
Ukubonisa imiphumela yosesho yamagama apelwe kabi kuyisu elisebenza kahle kakhulu… kepha ungahle ungathandi ukupela igama ngokusobala kusihloko sakho seposi noma kokuqukethwe kwakho. Ngaso sonke isikhathi, othile uzokhomba iphutha ukuphuma kuwe!
Esikhundleni sokubukeka unamahloni, sebenzisa ezinye izindawo kokuqukethwe kwakho ukupela igama ngokungafanele ngamabomu:
Your Thumela i-Slug (ividiyo engezansi)
Ngaphakathi kwamathegi esihloko kumathegi wehange (izixhumanisi).
Ngaphakathi kwesihloko noma amathegi encazelo ezithombeni.
Nayi ividiyo emfushane ivuliwe ungayishintsha kanjani i-post slug yakho ku-WordPress. UNgenzi lokhu ngemuva kokushicilela okuthunyelwe kwebhulogi, noma kunjalo! Ngenkathi ubhala okuthunyelwe kwebhulogi yakho, ungavuselela i-post slug yakho kalula:
Tags: nokwandisaPermalinkiposi slugslugWordPressi-wordpress permalink
Kungani ngingayithandi i-Facebook
Sep 2, 2009 ku-4: 26 AM
Kubukeka sengathi iCamtasia inamandla amaningi. Ingabe uthenge isoftware, noma ngabe wenza isilingo nje?
Sep 2, 2009 ngo-12: 42 PM
Kuyathakazelisa ukuthi ayibonakali inamandla njengenguqulo ye-'studio 'yeWindows. Kepha kulula kakhulu ukuyisebenzisa! I-interface ilingisa iMovie kakhulu. Ngiyithengile ngesikhathi iphuma ngaso. Bengisebenzisa i-Snap X Pro kepha ithe ukubhalisa kwami ​​kuphelile… angizange ngikuqaphele kwaba okubhaliselwe! Lokhu kuhle kakhulu.